Linear tatatra, fandroana tatatra, Floor tatatra, Bathroom Mirror Cabinet - Fenghua
ivelan'ny trano drainage
tatatra hita ao
Ary mbola hanohon seza
Mampita fandroana seza
MIARA-MIASA tamin'ny taona 1998
Ningbo Fenghua Aootan fahadiovana Ware Co. Ltd no misahana ny famokarana sy ny fandroana fandroana fantsona ivoahan'ny Accessories amin'ny traikefa ny 8 taona. Mino isika fa manana ny iray amin'ireo avo indrindra-toetra, tsara voavoatra sy ny sakany-miainga voafantina ny efitra fandroana Accessories amin'ny rehetra ny Aootan izao tontolo izao. Izany no safidy tsara ho an'ny trano maoderina ravaka, trano fandraisam-bahiny sy ny trano ara-barotra.
Izahay ary mandray voninahitra mba hamokarana OEM / ODM fanompoana vokatra manara-penitra sy ny fifaninanana amin'ny vidin'ny haingana lahateny. Aootan vonona ny hilalao ny anjara asany eo amin'ny nanampy ny raharaham-barotra. Contact us mba hahitana ny fomba ny nanolo-tena ho mpanjifa fahafaham-po dia afaka manampy anao hahatratra ny vokatra tsara indrindra eo amin'ny kalitao sy ny profitability.
Mijidina Outlet E
Wall tatatra W2
Wall tatatra W1
Square tatatra S1-02
Square tatatra S4-03
Mitsangana Outlet V-17
Corner tatatra L-01
Adiresy: No.21 Shewang Ind. Park, Chunhu Town, Fenghua Ningbo Shina